नेपाल निर्वाचन २०७४ - प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा | LIVE UPDATE | RESULTS - किन कम मत खस्यो रोल्पामा ?
किन कम मत खस्यो रोल्पामा ?
खेम बुढामगर | मङ्गलबार, १९ मङि्सर २०७४
रोल्पामा मतदान गर्दै महिला । तस्बिरः खेम बुढामगर
लिबाङ (रोल्पा) : प्रतिनिधि र प्रदेशको पहिलो चरणको सबैभन्दा कम मत रोल्पामा खस्यो। आखिर किन कम मत खस्यो त रोल्पामा ? प्रश्न उब्जिएको छ।१४ असार २०७३ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६९ प्रतिशत मतदान भएको जिल्लामा यो निर्वाचनमा भने ५५.४५ प्रतिशत मात्र मत खस्यो। एक लाख २७ हजार ६ सय २९ मतदातामध्ये ७० हजार सात सय ७६ ले मात्र मतदान गरे। जुन स्थानीय निर्वाचनभन्दा १४ प्रतिशत कम हो।
‘भूसामाजिक बनोट बहुलवादमा आधारित छ। तर, अहिलेको दलीय पद्धति दुई दलीयहुँदै एक दलीय व्यवस्थातिर उन्मुख हुन थालेकोले मतदान कम भएको मान्न सकिन्छ’, अध्येता नन्दबहादुर घर्तीमगर भन्छन, ‘लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनबाहेकलाई मतदान गर्ने विकल्प नभएपछि र मतदान गरेर पनि उपलब्धि नहुने देखेर मतदातामा मतदानको लागि उत्साह आएन्।’
दलका स्थानीय तहको नेता कार्यकर्ताले मतदातालाई फकाएर मतदानस्थलमा ल्याउन पहल नगर्ने हो भने यहाँका मतदाता आफैं मतदान स्थलमा आउन उत्साहित देखिँदैनन्।कार्तिक २५ गतेबाट मुस्किलले मतदाता शिक्षा सन्चालन गरियो, जो प्रभावकारी भएन। त्यसको प्रभाव पनि परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मतदाता स्वयं सेवक पनि मतदाता कहाँ नपुग्ने र दलका उम्मेदवार पनि मतदाताका घरदैलोमा नगएकाले मत कम खसेको मान्नेहरू पनि छन्।
मतदाता गाउँमा नहुनु
मंसिर र पुसको समय रोल्पाका अधिकांश मानिस कमाउनका लागि भारत र इँटाभट्टामा गएकाले पनि मतदान कम भएको हो। पटकपटक हुने चुनावमा मतदान गरे पनि कालापहाड (भारत) वा खाडी मुलुकमा मजदुरीका लागि जानुपर्ने बाध्यता मतदातामा भएकाले उनीहरूको प्राथमिकता चुनावमा कुरेर मतदान गर्ने भन्ने हुँदैन।
मतदाता परिवारको गर्जो टार्नका लागि विदेश जानैपर्छ। ‘यसपटक पनि अधिकांश मतदाता मजदुरीका लागि जिल्लाबाट बाहिरिसकेका थिए। त्यसैले पनि मतदान कम भयो’, माडी गाउँपालिका ६ कोर्चाबाङका समाजसेवी कमन बुढामगर भन्छन।राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा २२ हजार युवा रहेको देखाएको छ। पछिल्लो समय यो संख्या बढेको छ।
बम विष्फोटको डर
नेकपा (विप्लव समूह) को श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोटका डरले पनि कम मत खसेको मान्नेहरू पनि छन। जिल्लाका ८० मतदान स्थलका एक सय ६० मतदानस्थलमध्ये नेकपाका प्रभाव रहेको थबाङमा सबै भन्दा कम मत खसेको छ।नेकपाले शून्य मतदान गराउने लक्ष्य लिएको थबाङ गाउँपालिका १ स्थित जनचछु प्राथमिक विद्यालय बिबाङको ‘ख’ केन्द्रमा १९.५८ प्रतिशत मात्र मत खसेको छ।
माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थल रोल्पामा स्थानीय तहभन्दा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १४ प्रतिशत कम मत खसेको छ।
साविकको थबाङ गाविसको मतदान २९.३५ प्रतिशत मात्र छ। जिल्लाको सबैभन्दा बढी प्रतिशत मत सुवर्णावती गाउँपालिका ५ को बालकोट आधारभूत विद्यालयको काभ्रा ‘ख’ केन्द्रमा खस्यो। जहाँ माओवादी केन्द्रको प्रभाव रहेको ठाउँ हो। श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोटले मानिसमा त्रास पैmलिएका मतदान कम भएको मान्नेहरू पनि छन।
वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले भने नेकपाको बम विष्फोटले एक÷दुई प्रतिशत कम मत खसेको दाबी गरे।
स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले चुनाव जित्ने दाबी गर्दै आएको छ। वाम गठबन्धनले धेरै मतान्तरणले जित्ने भन्दै चुनावी प्रचारलाई घरदैलोमा केन्द्रीत गरेन। नेता अनन्त भन्छन् ‘वाम गठबन्धनले जितिहालिन्छ भनेर मतदातालाई मनाउन धेरै जोड गरेन्। त्यसैले पनि मत कम खस्यो।’
कांगे्रसले चुनावीसभालाई खासै जोड दिएन। र सिंचाई राज्यमन्त्री एवं लोकतान्त्रिक गठबन्धनका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार अमरसिंह पुनले घरदैलो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखे। उसको पकड क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य मत खसेको छैन। गठबन्धनबाट सन्तुष्ट नभएका मतदाताले मतदान गर्न नआएकाले पनि मत कम खसेको हो। बम विष्फोटका घटना, मतदाता शिक्षाको अभाव, मतदाता गाउँमा नहुनुलगायतले कम मत खसेको जिकिर छ।